လာမည့် LEGO အတွက် SDCC ၏သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံလွှာ Marvel နေ့စဉ်အမှား
22 / 04 / 2021 22 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1309 Views စာ0မှတ်ချက် 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge စစ်ပွဲ, အုတ်ခဲ, နေ့စဉ်အမှား, Daredevil, Instagram ကို, ဂျက်စီကာ Drew, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, San Diego မှရုပ်ပြ -con, SDCC, Spider-Man, ပင့်ကူ-အမျိုးသမီး, အဆိုပါ LEGO Group, အပြစ်ပေးသူ, အဆိပ်
ကောလာဟလများအတွက်ဇာတ်ကောင်စာရင်း Lego Marvel Daily Bugle သည်ယခင်က SDCC အထူးသီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပိုမိုကြာရှည်စွာကြီးထွားလာသည်။
Instagram သုံးစွဲသူ၏အဆိုအရ lego_fulcrum, San Diego Comic-Con အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သာတွေ့ဖူးသောဇာတ်ကောင်ကိုလာမည့်တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည် Lego Marvel နေ့စဉ် Bugle ကိုတိုက်ရိုက် -to- စားသုံးသူအစုံ, ယခုသော ဇွန်လတွင်ရောက်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်.
ဂျက်စီကာဒရူး၏ပင့်ကူမိန်းမသည် Lego Marvel ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် SDCC အသေးစားရုပ်ပုံနှင့်စည်းဝေးကြီးသီးသန့်သီးသန့်အားလုံးကဲ့သို့ပင်ယခုသူသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မျက်စိကျစရာအခကြေးငွေပေးသည်။ တကယ်တော့ရောင်းရန်မမိတ္တူရှိသည် အုတ်ခဲ, ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါင် ၂,၀၉၁.၀၁ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
အကယ်၍ Spider-Woman Daily Bugle တွင်ပေါ်လာလျှင် (အကယ်၍ ၎င်းအစစ်အမှန်ရှိခဲ့လျှင် - သတိရပါ၊ အားလုံးကောလဟာလများဖြစ်သည်) - SDCC minifigure ၏တန်ဖိုးကိုသိသိသာသာကျဆင်းသွားစေသည်။ မည်သည့်ဒီဇိုင်းသစ်မဆိုမူရင်းဗားရှင်းနှင့်တူညီနိုင်ဖွယ်မရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကရှစ်နှစ်ရှိသော်ငြားကျွန်ုပ်တို့သည်သာလွန်ထူးကဲသောရုပ်ပုံများကိုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ (Dual- ပုံသွင်းခြေထောက်ကောင်းတစ် ဦး st ပါလိမ့်မယ်art.)
ကျနော်တို့ပင့်ကူ - မိန်းမတ ဦး တည်းရှိပြီးသား, 76057 အတွက် Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge စစ်ပွဲ။ သို့သော်၎င်းဗားရှင်းသည်မေပါကေးကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြခဲ့သည် Lego Spider-Girl အဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ပါ။ နှင့် Instagram ကိုအသုံးပြုသူသည်နှင့်အညီ 1414falconfan, Daily Bugle တွင်ပါ ၀ င်သည့်ဇာတ်ကောင်မှာ Jessica Drew's ဖြစ်သည်။classic မတ်မတ် '။
Spider-Woman အကြားမှာ Daredevil နှင့်ပြစ်ဒဏ်, ကောလဟာလသတင်းများအရဒေါ်လာ ၂၉၉ သတ်မှတ်ချက်အတွက်အသေးစားပုံသဏ္-ာန်သည်အလွန်ကျန်းမာနေပုံရသည်။ နောက်ထပ်အဆိပ်.
← LEGO အတွက်ကောလာဟလသတင်းများထွက် Marvel နေ့စဉ် Bugle D2C
အသစ်တစ်ခုကို Lego ဖြစ်ပါတယ် Friends တီဗွီအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလမှာလာမည်လား။ →